Soomaalida Sweden maxeey ka yiraahdeen doorashadda maanta loo dareeray? – Somali Integration Tv
Waxaa qoray Yaasmin Elmi	 La dabacay Maanta Sep 9, 2018 0
Dalka ayaa guud ahaan looga dareeray doorashadda guud. Waxaa saacad wax ka yar la filayaa ineey soo baxdo natiijadii ugu horeeysay ee tirinta codadka. Saas oo ay tahayna soomaalida Sweden, sanadkan waxaa ay ka qeyb qaateen doorashadda iyagoo tagay goobaha codka lugu dhiibto.
Haddaba fanaanada caanka ah Sherihan “Cherrie” Xirsi, oo maanta codkeeda dhiibatay ayaa sheegtay in dadka deegaanada ajaanibt aysan kalsooni ku qabin siyaasiinta. Taasina ay ugu wacan tahay sida aaneey uga muuqan dad badan goobaha codadka.
Fanaanadan oo barteeda Instagram soo dhigtay, ayey ku sheegtay ineey codka dhiibaneeyso siineeysana cidda ay u aragto ineey bulshadda u adeegeeyso. Misna soo jiideeysa dad badan oo codka dhiibta. Dhanka kale siyaasigga lugu mgacaabo Axmed Kaahin oo horey ugu tirsanaan jiray xisbiga Modarat-ka ayaa sheegay in uu ka baxay xisbigaa una wareegay xisbiga Dhexe ee Center-ka, kaas oo uu sheegay in uu madaxa xisbigga Annie Lööf ay tahay hogaamiyaha keliya ee sida cad uga soo horjeeda kooxaha cunsuriyiinta ah.
Faadumo Nuur oo waa siyaasiyad ka tirsan xisbbiga Lebral-ka, waxaa ay dhankeeda sheegtay doorashadii 2014-kii uu xisbigeeda degmadda Rinkeby ka halay wax ka yar 1% ay ugu wacan tahay in xisbigaasi aanu siinin dadka balan qaad ah ineey biddix iyo middig eeysan wax u balan qaadin, sidoo kelna eeysan iskuulada gaarka loo leeyahay iyo masaajido la dhiso eeysan balan qaadin. Isku soo duub saacadaha soo socda ee caawa ayaa la oganaaya cidda afarta sanno ee socota dalka Sweden hogaanka u qaban doonto xisbiyadda Casaanka-dooga iyo kuwa xulufadda ah ee middig.